WoopShop.com nwere obi ụtọ ịnye ọrụ mbupu ụgbọ mmiri zuru ụwa ọnụ na-arụ ọrụ ugbu a n'ihe karịrị mba 200. O nweghi ihe dị anyị mkpa karịa iwebata ndị ahịa anyị ezigbo uru na ọrụ. Anyị ga-aga n'ihu na-eto igbo igbo mkpa nke ndị ahịa anyị niile, na-ebuga ọrụ karịrị ihe ndị ọzọ tụrụ anya na ebe ọ bụla n'ụwa.
A ga-ebufe ngwugwu site n'ụlọ nkwakọba ihe anyị na China site na ePacket ma ọ bụ EMS dabere na ibu na nha ngwaahịa ahụ. A na-ebubata ngwungwu si n'ụlọ nkwakọba ihe US site na USPS. Ya mere, maka ihe eji arụ ọrụ, a ga-eziga ụfọdụ ihe na nchịkọta dị iche iche.
WoopShop nwere obi ụtọ inye ndị ahịa anyị nnyefe aka na 200 + mba gburugburu ụwa. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ ebe anyị na-enweghị ike ịbanye ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na ị dị na otu n'ime mba ndị ahụ, anyị ga-akpọtụrụ gị.
Anyị enweghị ikike ịchịkwa ụgwọ kọstọm, Anyị anaghị akwụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ kọstọm ọ bụla ozugbo ebubatara ihe ndị ahụ n'ihi na ọ bụ amụma ya na ọrụ mbubata na-adịgasị iche iche site na mba ruo mba. Site na ịzụrụ ngwaahịa anyị, ị kwenyere na enwere ike zigara gị otu ma ọ bụ karịa nchịkọta ma nwee ike ịnweta ụgwọ kọstọm mgbe ha rutere mba gị.
Ụzọ mbata na oge ezipụ
A na-ezipụ iwu gị niile n'ime awa iri atọ na isii. Ntupụta na-ewere ụbọchị ọrụ ụbọchị 36-7 na obere ụbọchị 20 ụbọchị azụmahịa.
Ọnọdụ Oge Atụmatụ Mbupu
United States 7-20 ụbọchị azụmahịa
Canada, Europe 10-20 ụbọchị azụmahịa
Australia, New Zealand 10-30 ụbọchị azụmahịa
Mexico, Central America, South America 15-30 ụbọchị azụmahịa
You ga-enweta email ozugbo ụgbọ mmiri gị ji ebu ozi gị na-achọ, mana oge ụfọdụ anaghị enweta nsuso ụgbọ mmiri n'efu. Oge ụfọdụ nsuso NJ na-ewe ụbọchị 2-5 maka ọrụ nsuso iji melite sistemụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ndị ọzọ, biko egbula oge ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-eme ike anyị niile iji nyere gị aka.
Ndị ahịa weere anyị 5.0 / 5 dabeere na nyocha 83472.
Magburu onwe corset, M mmasị na eziokwu na ọ bụ na azụ na warara ezu obosara nke fasteners, ọ dịghị ihe na-adịghị anakọta na anya idiocha
Dị jụụ nke ukwuu. Ogo nke m 44-46, were M, bịara n'ụzọ zuru oke.
Top zuru oke kwekọrọ na nkọwa ahụ, ogo dị oke, enwere m mmasị na ihe niile
A mara mma corset, Otú ọ dị, ihe niile corsets nke ụlọ ahịa a). Sekwa ​​akwa ụlọ ọrụ. Ọ gaghị ekwe omume ịchọta mmejọ na ihe)). O zuru oke. Daalụ
Топ отличного качества, правда мне мал в чашке оказался. ОГ: 98, ОТ: 64 Я так и думала, но решила рискнуть, ma ọ bụrụ na ị chọghị.